Ndị ọkachamara na Semalt - 8 Atụmatụ Iji Ndobe A Mac Site Malware, Viruses & Trojans
Ọpụpụ ndị na-adịbeghị anya nke ndị Flashback Trojans natara nlezianya anya site n'aka ndị ike gwụrụ na nje na malware. N'ikwu okwu na ụzụ, Mac niile na malware abanye na ngwaọrụ gị site na ngwa na egwuregwu ndị achọghị. Ya mere, ọ dị mkpa ịchekwa ngwaọrụ gị n'oge ọ bụla o kwere omume tupu oge agafeela, ị ga-efunahụ data gị niile.
N'ebe a, Michael Brown, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Na - arụ Ọrụ nke Ọkachamara , enyewo ụfọdụ ntụziaka dị mfe iji chebe Mac site na nje na malware - cpanel webdav log.
Ọ bụrụ na i tinyela Flashback na ụdị malware na nje ndị ọzọ site na Java, ị ga-ewepụ ma ọ bụ gbanyụọ ya ngwa ngwa o kwere mee. Apple na Microsoft enyela ndị ọrụ ha ọtụtụ mmelite na nchedo Java. Ị nwere ike nyochaa mmelite ndị ahụ ịmara otú ị ga-esi gbanyụọ Java nke ebute nje na malware. Nke a ga - egbochi ngwaọrụ Mac gị ka ọ ghara imebi.
2. Melite ngwa ọdịnala gị na ngwaọrụ OS X mgbe niile
Ọ dị ezigbo mkpa imelite ngwa gị na software OS OS na oge niile. Apple na-ahapụ mmelite nche kwa izu iji mee ka ndị ọrụ ya mara ihe ụdị software na ngwa ndị ọzọ dị mma ịga. Ị nwere ike igbochi malware na ọgụ mgbochi site na ịnọgide na-enwe ngwa ngwa na egwuregwu otu ugboro n'izu. Maka nke a, ị ga-aga na ngalaba Mmelite Software ma budata ngwa ngwa Apple.
3. Gbanyụọ ma ọ bụ Wepụ Adobe Acrobat Reader
Ikwesighi idowe Adobe Acrobat Reader na nchekwa Mac gị ma ọ bụrụ na ị naghị eji ya. Ndị ọkachamara na nkà na ụzụ na-egosi na Adobe Acrobat Reader enweela nsogbu nchebe na nbibi. Ọ bụ ya mere ọ na-atụ aro ka ị wepụ ya ma ghara ịwụnye ya ọzọ. Anyị na-atụ aro ka ị chọpụta ụzọ ọzọ dị ka Adobe Acrobat Reader abụghị usoro dị mma..
4. Wụnye Ngwá Ọrụ Nje Virus maka Mac os X
Ọtụtụ ndị na-eji usoro antivirus na ngwaọrụ Mac ha. Ọ dị mma ịga na nke ahụ mana jide n'aka na ịmeela usoro antivirus gị. Ịkwesịrị ịwụnye na kpochapụ ngwaọrụ gị na mgbe niile. Ọ ga-eme ka ngwaọrụ Mac gị pụọ na malware ma nwee ike inyere gị aka ịnweta ịntanetị n'enweghị nsogbu ọ bụla.
5. Jiri nkwụnye oghere Flash
Ozugbo ị kwụsịrị ọrụ Flash na Acrobat, nzọụkwụ ọzọ bụ iji Flash Block ngwa mgbakwunye. Ọ dị mkpa iji wụnye mgbakwunye iji zere nsogbu ọ bụla na ịntanetị. Nke ahụ nwere ike igbochi malware na ụdị nje ọ bụla site na idobe ngwaọrụ Mac gị. Ihe mgbakwunye ahụ dị maka ihe nchọgharị niile ma nwee ego.
6. Gbanyụọ Akpaaka akpaaka mgbe ị gụchara
Ozugbo ibudatara faịlụ achọrọ, ọ dị mkpa ka ị gbanyụọ nhọrọ ntinye faịlụ nhọta. Safari na-emejọ iji mepee faịlụ mgbe ebudatara ha. Maka nchekwa na nchekwa gị n'ịntanetị, ị ga-emerịrị njirimara a n'oge mbụ.
7. Kwado ngosipụta nke Malware
Ịhapụ nkwenye ndị na-emegide malware dị oké mkpa. Ọ bụ ya mere ị ga - eji gbaa ego abụọ ma ọ bụrụ na enyere ha aka ma ọ bụ. Maka nke a, ị ga-aga Nhọrọ System Open ma pịa "Nche & Nzuzo." Ị ga-ahụkwa ma ọ bụrụ na emelitere ndepụta ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịkwesịrị imelite ya n'oge ọ bụla o kwere omume.
8. Zere Ịwụnye Random Software
Mgbe ị na-eji ịntanetị, a ga-agwa gị ka ị wụnye ọtụtụ mmemme. Ọ bụ ihe aghụghọ nke ndị na-agba ọsọ n'ihi na ha chọrọ izuru ozi nkeonwe gị. Ikwesighi itinye ihe ọ bụla ị na-ejighị n'aka mgbe ị na-egwugharị na ịntanetị. Ozugbo ụfọdụ ihe dị iche iche pụta, a na-atụ aro ka ị mechie windo ndị ahụ ma ọ bụ malitegharịa kọmputa gị.